အစားအ​သောက်​ ကျိန်​စာ သင့်နေတဲ့ ” ရွှေမြန်မာများ “ – ရှအေလငျး
အစားအ​သောက်​ ကျိန်​စာ သင့်နေတဲ့ ” ရွှေမြန်မာများ “
စာဖတ်ပျင်းပြီး အထွေထွေဗဟုသုတ အားနည်း၍အစားအ​သောက်​ ကျိန်​စာ သင့်နေသောရွှေမြန်မာများ
ရွှေမြန်​မာတွေရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းက ၅၇ နှစ် အာရှမှာ အနိမ့်ဆုံးဘဲ
အသက် ရှင်သန်ဖို့အတွက် နေစဉ်စားသောက်နေရတဲ့အစားအ​သောက်​တွေကို ကျန်းမာ​ရေးအသိနဲ့ မချင့်ချိန်ဘဲစားသောက်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာ​ရေးထိခိုက်ရုံမျှ မကဘဲကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးတွေ ၊ ကလေးငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ်​ပါအညွန့်ကျိုးသွားနိုင်ပါတယ်.ဈေးသက်သာလို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် မပေးပါနဲ့ကျန်းမာ​ရေးအသိ မရှိဘဲ လျှာနဲ့စိတ်ကို အလိုလိုက်တာပါ.အခုဆိုအသက်​ ၄၀ နဲ့ အထက်​ တွေကို ကြည့်လိုက် မေးလိုက်ရင်ဟိုဟာက မတည့် ဒီဟာက စားလိုမရ နဲ့အရှင်လက်လက် ပြိတ္တာရောဂါ တွေဖြစ်တဲ့ဆီးချို ၊ သွေးချို ၊ သွေးတိုး ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း စတဲ့ရောဂါတွေ မရှိတဲ့သူ ​တော်​​တော်​ကို ရှားလာတယ်.တဆင့်တက် အဲ့ဒီထက်ပိုဆိုးတဲ့အသဲကင်ဆာ ၊ အဆုပ်ကင်ဆာ ၊ ကျောက်ကပ်ကင်ဆာရောဂါတွေ အဖြစ် အရမ်းများလာတယ်.
အသက် ၆၀ ကျော်တွေကြည့်လိုက်တော့အရိုးပါး အရိုးပွ နဲ့ သတိမေ့တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်နေကြတယ်က​လေး​လေးတွေကြည့်တော့လည်းအရောင်စုံ အရသာစုံ အနံ့စုံ နဲ့လက်လီဈေး …. ၅၀ ကျပ်တန်လက္ကားဈေး ……၃၀ ကျပ် နဲ့ထုပ်လုပ်စားရိပ်..၂၀ ကျပ် လောက်ဘဲရှိတဲ့အချိုရည်မျိုးစုံ ၊ ဂျယ်လီခွက်ကြီးမျိုးစုံ နဲ့အချိုမူန့် နဲ့ ကြက်သားမှုန့် ရောမွေထားတဲ့လေဖောင်းမူန့်အစုံအရောင်စုံ အရသာစုံ အနံစုံ နဲ့ချိုချဉ်အစုံ​ ပီကေအစုံ နိုခဲအစုံ
ပြီးတော့အသားပုပ်ပေါင်းစုံ ကြာရှည်ခံဓါတုဆေးပေါင်းစုံ နဲ့လုပ်တဲ့ပင်လယ်စာလို့ခေါ်တဲ့အသားတုပေါင်းစုံ ၊ အကင်ပေါင်းစုံ တွေရဲကောင်းမူကြောင့်ပိန်​လှီလှီ ညှောင့်နာနာ နဲ့ ရှူနာ ရှိုက်ကုံးလေးတွေဖြစ်လို့တချို ​ငွေ​ကြေးချမ်းသာပြီး ကျန်းမာ​ရေးအသိမရှိတဲ့မိသားစုကကလေးတွေဆို ပိုဆိုးတယကျောင်းကို မုန့်​ဖိုးအများကြီးပေး ထားတော့တွေ့သမျှ အသစ်ပေါ်တိုင်းဝယ်စားတယ်တွေသမျှ မသောက်ဖူးသေးတဲ့ အချိုရည်အစုံ သေက်ပြီး​နောက်​ဆုံး ၁၂ နှစ် ၁၃ နှစ်သားလေးကိုကျောက်ကပ်ပျက်ပြီး ကျောက်ကပ်အလှူရှင် မရှိသေးလိုတပတ် တခါ အကြောဖောက်ပြီး ကျောက်ကပ်ဆေးနေရတဲ့ကလေးတွေ အများကြီးတွေ့ နေရတယ်
လူကြီးများ လေ့လာပါ သတိထားပါ ဆင်ချင်ပါ ပြီးရင်ကလေးတွေကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီး သင်ပေးပါခက်တာက လူကြီးတွေ ကိုယ်​တိုင်​က မသိတာဘဲတချို အသိတရားနည်းတဲ့ လူကြီးတွေ ပြောသေးတယ်” တသက်လုံး စားလာတာ အခုမှတော့ မစားဘဲမနေနိုင်ပေါင် သေမှသေရောဘဲ ” ဆိုတဲ့လူကြီးတွေ အများကြီးဘဲ ။ တရုတ်​ကြီးတယောက်ပြောတာ သွားသတိရတယ် ။
” နိတို့မြန်မာတွေ ကျန်းမာ​ရေးအသိကိုမရှိဘူးဘိုင်းကနဲ့ လဲပြီးမသေရင်ပြီးရော အကုန်စားတယ်တဲ့ ”
.နေစဉ်စားသောက်နေတဲ့ အစားအ​သောက်​တွေမှာအဆိပ်တွေ အဆိပ်တွေအိမ်ရှင်မတွေဟင်းချိုမူန့် ကြက်သားမှုန့်တွေထည့် ဆီအညံတွေနဲ့ ဆီပြန်​ဟင်းတွေချက်ပြီးကိုယ်အရမ်းချစ်ရတဲ့ ကိုယ့်ယောင်္ကျား နဲ့ သားသမီးတွေကိုအိမ်က မီးဖို​ချောင်​ထဲမှာ အဆိပ်​ခတ်​နေကြတယ် ။ချက်​ချင်း မသေပေမယ့်တဖြည်းဖြည်း ကျန်းမာ​ရေး ချို့တဲ့ကျန်းမာ​ရေး မကောင်းတော့ ကျန်းမာ​ရေးစရိပ်တွေကြောင့်စီးပွား​ရေးတွေ လုံးပါးပါးပြီးနောက်ဆုံး မိသားစုတစုလုံး ဘဝပျတ်သားသမီးတွေပါ အညွှန်တုန်းကုန်ပါလိပ်မယ်
.ပြီးတော့ထုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကို ဘယ်လို အရေးယူပါ ဘာညာနဲ့အစိုးရ ကိုချည်းဘဲ အပြစ် မ​ပြောပါနဲ့အစိုးရက တင်းတင်းကြပ်ကြပ် အရေးယူမူတွေလုပ်ထားတဲ့မူးယစ်ဆေး ဆိုတာတွေကိုတောင်မှအသိတရား နည်းပါးသူတွေက မရမကရှာဝယ်ပြီးသုံးစွဲနေကြသေးတာဘဲအသိတရားမရှိ သုံးစွဲသူတွေရှိနေသရွေ့ ထုပ်လုပ်ရောင်းချသူတွေရှိနေမှာပါဘဲဟင်းချို မူန့်လေး ကြက်သားမှုန့်လေးမှ မပါရင်စားမကောင်းဘူး လျှာထဲမစွဲဘူးအသားဟင်းချက်ရင် ဆီမြုပ်နေမှ ကောင်းတာဟင်းချက်ရင် အရောင် ရဲရဲလေးမှ လှတာ
အဲ့ဒီတော့စားကောင်းပြီး လျှာထဲစွဲချင်တယ်ဆီမြုပ်ပြီး အရောင်လှချင်တယ်ဈေးကျတော့ ပေါလော ရှောလော သုံးချင်တယ် ဆိုတော့အချိုမူန့် များများပြည့်ဝဆီ အညံစားတွေနဲ့ဆေးဆိုးထားတဲ့ အရောင်တင်မူန့်တွေဘဲ
စားရတော့မှာပေါ့ ။အစိုးရက ထုတ်လုပ်သူတွေကိုဘယ်လိုဘဲ အရေးယူ အပြစ်​​ပေးနေပေမယ့်ကျန်းမာ​ရေး အသိတရားမရှိ စားသုံးသူတွေရှိနေသရွေ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူတွေရှိနေမှာပါဘဲ.မှားတာပါရင်​လည်း ​စေတနာအမှားမို့ ခွင့်​လွတ်​ပါ…..လိုတာရှိရင်​လည်း​ အောက်​ကဖြည့်​​ပေးပါ…….
စိတ်​သ​ဘောထားချင်းတိုက်​ဆိုင်​ရင်​ Share ​ပေးပါ….
မူရင်းတင်သူကို လေးစားစွာ credit ပေးပါတယ်
လိုင်းပေါ်တွေ့လို့ ကျန်းမာရေးအတွက် share ပေးတာဖြစ်ပါတယ်
စာဖတျပငျြးပွီး အထှထှေဗေဟုသုတ အားနညျး၍အစားအသောကျ ကြိနျစာ သငျ့နသေောရှမွေနျမာမြား
ရှမွေနျမာတှရေဲ့ ပမျြးမြှသကျတမျးက ၅၇ နှဈ အာရှမှာ အနိမျ့ဆုံးဘဲ
အသကျ ရှငျသနျဖို့အတှကျ နစေဉျစားသောကျနရေတဲ့အစားအသောကျတှကေို ကနျြးမာရေးအသိနဲ့ မခငျြ့ခြိနျဘဲစားသောကျရငျ ကိုယျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးထိခိုကျရုံမြှ မကဘဲကိုယျ့ရဲ့ရငျသှေးတှေ ၊ ကလေးငယျတှရေဲ့ အနာဂတျပါအညှနျ့ကြိုးသှားနိုငျပါတယျ.ဈေးသကျသာလို့ ဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြ မပေးပါနဲ့ကနျြးမာရေးအသိ မရှိဘဲ လြှာနဲ့စိတျကို အလိုလိုကျတာပါ.အခုဆိုအသကျ ၄၀ နဲ့ အထကျ တှကေို ကွညျ့လိုကျ မေးလိုကျရငျဟိုဟာက မတညျ့ ဒီဟာက စားလိုမရ နဲ့အရှငျလကျလကျ ပွိတ်တာရောဂါ တှဖွေဈတဲ့ဆီးခြို ၊ သှေးခြို ၊ သှေးတိုး ၊ နှလုံးသှေးကွောကဉျြး စတဲ့ရောဂါတှေ မရှိတဲ့သူ တျောတျောကို ရှားလာတယျ.တဆငျ့တကျ အဲ့ဒီထကျပိုဆိုးတဲ့အသဲကငျဆာ ၊ အဆုပျကငျဆာ ၊ ကြောကျကပျကငျဆာရောဂါတှေ အဖွဈ အရမျးမြားလာတယျ.
အသကျ ၆၀ ကြျောတှကွေညျ့လိုကျတော့အရိုးပါး အရိုးပှ နဲ့ သတိမတေဲ့ ရောဂါတှေ ဖွဈနကွေတယျကလေးလေးတှကွေညျ့တော့လညျးအရောငျစုံ အရသာစုံ အနံ့စုံ နဲ့လကျလီဈေး …. ၅၀ ကပျြတနျလက်ကားဈေး ……၃၀ ကပျြ နဲ့ထုပျလုပျစားရိပျ..၂၀ ကပျြ လောကျဘဲရှိတဲ့အခြိုရညျမြိုးစုံ ၊ ဂယျြလီခှကျကွီးမြိုးစုံ နဲ့အခြိုမူနျ့ နဲ့ ကွကျသားမှုနျ့ ရောမှထေားတဲ့လဖေောငျးမူနျ့အစုံအရောငျစုံ အရသာစုံ အနံစုံ နဲ့ခြိုခဉျြအစုံ ပီကအေစုံ နိုခဲအစုံ
ပွီးတော့အသားပုပျပေါငျးစုံ ကွာရှညျခံဓါတုဆေးပေါငျးစုံ နဲ့လုပျတဲ့ပငျလယျစာလို့ချေါတဲ့အသားတုပေါငျးစုံ ၊ အကငျပေါငျးစုံ တှရေဲကောငျးမူကွောငျ့ပိနျလှီလှီ ညှောငျ့နာနာ နဲ့ ရှူနာ ရှိုကျကုံးလေးတှဖွေဈလို့တခြို ငှကွေေးခမျြးသာပွီး ကနျြးမာရေးအသိမရှိတဲ့မိသားစုကကလေးတှဆေို ပိုဆိုးတယကြောငျးကို မုနျ့ဖိုးအမြားကွီးပေး ထားတော့တှသေ့မြှ အသဈပျေါတိုငျးဝယျစားတယျတှသေမြှ မသောကျဖူးသေးတဲ့ အခြိုရညျအစုံ သကျေပွီးနောကျဆုံး ၁၂ နှဈ ၁၃ နှဈသားလေးကိုကြောကျကပျပကျြပွီး ကြောကျကပျအလှူရှငျ မရှိသေးလိုတပတျ တခါ အကွောဖောကျပွီး ကြောကျကပျဆေးနရေတဲ့ကလေးတှေ အမြားကွီးတှေ့ နရေတယျ
လူကွီးမြား လလေ့ာပါ သတိထားပါ ဆငျခငျြပါ ပွီးရငျကလေးတှကေို အကြိုးအကွောငျးပွောပွပွီး သငျပေးပါခကျတာက လူကွီးတှေ ကိုယျတိုငျက မသိတာဘဲတခြို အသိတရားနညျးတဲ့ လူကွီးတှေ ပွောသေးတယျ” တသကျလုံး စားလာတာ အခုမှတော့ မစားဘဲမနနေိုငျပေါငျ သမှေသရေောဘဲ ” ဆိုတဲ့လူကွီးတှေ အမြားကွီးဘဲ ။ တရုတျကွီးတယောကျပွောတာ သှားသတိရတယျ ။
” နိတို့မွနျမာတှေ ကနျြးမာရေးအသိကိုမရှိဘူးဘိုငျးကနဲ့ လဲပွီးမသရေငျပွီးရော အကုနျစားတယျတဲ့ ”
.နစေဉျစားသောကျနတေဲ့ အစားအသောကျတှမှောအဆိပျတှေ အဆိပျတှအေိမျရှငျမတှဟေငျးခြိုမူနျ့ ကွကျသားမှုနျ့တှထေညျ့ ဆီအညံတှနေဲ့ ဆီပွနျဟငျးတှခေကျြပွီးကိုယျအရမျးခဈြရတဲ့ ကိုယျ့ယောင်ျကြား နဲ့ သားသမီးတှကေိုအိမျက မီးဖိုခြောငျထဲမှာ အဆိပျခတျနကွေတယျ ။ခကျြခငျြး မသပေမေယျ့တဖွညျးဖွညျး ကနျြးမာရေး ခြို့တဲ့ကနျြးမာရေး မကောငျးတော့ ကနျြးမာရေးစရိပျတှကွေောငျ့စီးပှားရေးတှေ လုံးပါးပါးပွီးနောကျဆုံး မိသားစုတစုလုံး ဘဝပတျြသားသမီးတှပေါ အညှနျတုနျးကုနျပါလိပျမယျ
.ပွီးတော့ထုပျလုပျတဲ့သူတှကေို ဘယျလို အရေးယူပါ ဘာညာနဲ့အစိုးရ ကိုခညျြးဘဲ အပွဈ မပွောပါနဲ့အစိုးရက တငျးတငျးကွပျကွပျ အရေးယူမူတှလေုပျထားတဲ့မူးယဈဆေး ဆိုတာတှကေိုတောငျမှအသိတရား နညျးပါးသူတှကေ မရမကရှာဝယျပွီးသုံးစှဲနကွေသေးတာဘဲအသိတရားမရှိ သုံးစှဲသူတှရှေိနသေရှေ့ ထုပျလုပျရောငျးခသြူတှရှေိနမှောပါဘဲဟငျးခြို မူနျ့လေး ကွကျသားမှုနျ့လေးမှ မပါရငျစားမကောငျးဘူး လြှာထဲမစှဲဘူးအသားဟငျးခကျြရငျ ဆီမွုပျနမှေ ကောငျးတာဟငျးခကျြရငျ အရောငျ ရဲရဲလေးမှ လှတာ
အဲ့ဒီတော့စားကောငျးပွီး လြှာထဲစှဲခငျြတယျဆီမွုပျပွီး အရောငျလှခငျြတယျဈေးကတြော့ ပေါလော ရှောလော သုံးခငျြတယျ ဆိုတော့အခြိုမူနျ့ မြားမြားပွညျ့ဝဆီ အညံစားတှနေဲ့ဆေးဆိုးထားတဲ့ အရောငျတငျမူနျ့တှဘေဲ
စားရတော့မှာပေါ့ ။အစိုးရက ထုတျလုပျသူတှကေိုဘယျလိုဘဲ အရေးယူ အပွဈပေးနပေမေယျ့ကနျြးမာရေး အသိတရားမရှိ စားသုံးသူတှရှေိနသေရှထေု့တျလုပျရောငျးခသြူတှရှေိနမှောပါဘဲ.မှားတာပါရငျလညျး စတေနာအမှားမို့ ခှငျ့လှတျပါ…..လိုတာရှိရငျလညျး အောကျကဖွညျ့ပေးပါ…….
စိတျသဘောထားခငျြးတိုကျဆိုငျရငျ Share ပေးပါ….
မူရငျးတငျသူကို လေးစားစှာ credit ပေးပါတယျ
လိုငျးပျေါတှလေို့ ကနျြးမာရေးအတှကျ share ပေးတာဖွဈပါတယျ
လားရှိုးက ..ဟူးမူဆည် အောက်ခြေက… ရေတွေထွက်နေတာ မို့…...